Imandarmedia.com.np: महिलाहरुलाई स्तन क्यान्सर छ या छैन ? यसरी थाहा पाउनुहोस्
Lifestyle, Main News » महिलाहरुलाई स्तन क्यान्सर छ या छैन ? यसरी थाहा पाउनुहोस्
महिलाहरुलाई स्तन क्यान्सर छ या छैन ? यसरी थाहा पाउनुहोस्
स्तन क्यान्सर महिलाहरूको ज्यान लिने प्रमुख रोग हो । क्यान्सरको सुरुवाती अवस्थामा हेलचेक्रयाइँ गर्दा स्तन क्यान्सरले ज्यान लिन सक्छ । सामान्य विचार नपु¥याउँदा र वेलैमा रोगको निदान एवं उपचार गर्न नसक्दा स्तन क्यान्सरबाट कैयौँ महिलाले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् ।
स्तनमा नयाँ वा असामान्य गिर्खा, डल्लाहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुराको जानकारी महिलाहरू आफैँ स्तन छामेर पत्ता लगाउन सक्छन् । नियमित रूपमा आफैँले राम्ररी हेरेर तथा छामेरसमेत स्तनमा भएका गिर्खा थाहा पाउन सक्छन् ।
दाहिने स्तनको परीक्षण देब्रे हातले र देब्रे स्तनको दाहिने हातले परीक्षण गर्नुपर्दछ । स्तनको आकार र छालामा भएको परिवर्तन पत्ता लगाउन ऐनाअगाडि स्तन देखिने गरी परीक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । स्तनको वरिपरि र काखीमुनि गिर्खाहरू भए/नभएको छामेर हेर्नुपर्दछ ।
Trending : Lifestyle, Main News